फेरि कश्मिरमा भारतिय सेनामा भर्ना भएका नेपाली लक्ष्मण बिसीको यसरि भयो दुखद निधन ! « Etajakhabar
फेरि कश्मिरमा भारतिय सेनामा भर्ना भएका नेपाली लक्ष्मण बिसीको यसरि भयो दुखद निधन !
प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७६, शुक्रबार २१:५७
काठमाडौं : भारत प्रशासित काश्मिरमा हिमपहिरोका कारण पाँच भारतीय सेनाको निधन भएको छ। लगातार परेको हिमपातका हिमपहिरो जाँदा पाँच भारतीय सेनाको निधन भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। हिमपहिरोमा परेर एक नेपाली सैनिक पनि परेको सेनाले जनाएको छ।
हिमपहिरोमा निधन हुनेमा सैनिक जवान सैनिक लक्ष्मण बिसी रहेको सेनाले जनाएको छ। त्यस्तै निधन हुनेमा दुई नायक रहेका छन् । उनीहरुको नाम रामेश्वर कुमार र पुरुषोत्तम लाल हुन् ।
त्यस्तै चन्दबधन चौरसीया र रञ्जित सिंहको पनि निधन भएको छ। निधन भएका सेना प्रति भारतका थल सेना प्रमुखमनोज मुकन्द नरवडेले मृ तक सेना प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । हिमपहिरोमा परेर धेरै स्थानीयको पनि निधन भएको सेनाले जनाएको छ। निधन कति जनाको भएको भन्ने भने खुलाएको छैन् ।
यो पनि पढ्नुहोस :: कोलम्बोमा निजी हेलिकप्टर उडानमा २५ बर्षपछि प्रतिबन्ध हटाइयो
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेले शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको मध्यभागबाट निजी अपरेटरहरूले हेलिकोप्टर उडानको संचालनमा २५ बर्षे प्रतिबन्ध हटाएको घोषणा गर्नुभएको छ ।
सुरूमा यसका लागि सरकारले प्रमुख चार विमान कम्पनीले पुनः सेवा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । “हामीले यस अबसरका लागि लामो समयदेखि पर्खिरहेका थियौँ,” स्काइलार्क उड्यन सेवा कम्पनीका सञ्चालन व्यवस्थापक क्याप्टेन रवि धर्माविक्रमाले भन्नुभयो । यो श्रीलङ्काको उड्ययन इतिहासमा एउटा प्रमुख उपलब्धि हो ।
“निजी विमान कम्पनीलाई दिइएको यस अनुमतिले हामीले देशको पर्यटन र अर्थतन्त्रमा थप टेवा पु¥याउन सक्नेछौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, श्रीलङ्का आउने धेरै खर्च गर्नसक्ने पर्यटकको चाहना छोटो समयमा प्रमुख पर्यटकीयस्थलमा पुग्ने र त्यहाँका मनोरम दृश्यको आनन्द लिने रहने गरेको थियो । तर निजी विमानले अवतरण वा उडान गर्नका लागि स्थान नै नपाउँदा यो सेवा दिन निजी विमान सेवा प्रदायकलाई सम्भव थिएन ।